Budata akwụkwọ ahụ aja Google Pixel 3 | Gam akporosis
Ofwa nke telephony n'ozuzu, na-efunahụ ikike maka ịtụnanya, n'ihi ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke nkwụsị, nke n'ọtụtụ ọnọdụ si n'aka otu onye na-emepụta ihe, iji hụ otú ọha na eze si emeghachi omume. Naanị ụlọ ọrụ na-agba mbọ iji zere ụdị nwupu ọ bụla bụ Apple, ọ bụ ezie na ọ nwebeghị ike igbochi iPhones ọhụrụ ka agbapụ ụbọchị ahụ tupu ngosipụta gọọmentị.
Ọzọ October 9, a na-egosi ihe ọhụrụ Google Pixel 3. Ruo izu ole na ole, enweela ọtụtụ ibe weebụ ndị bipụtara nyocha nke ọnụahịa a, ọnụahịa nke rutere ha site na ahịa ojii na Ukraine nke ọtụtụ ezuru, ma ọ bụ furu efu, na akụrụngwa ebe ọ na-ezukọ.
Taa, anyị amaraworị nhazi na nkọwa nke Google Pixel ọhụrụ. Naanị ihe kọrọ anyị bụ na akwụkwọ ahụ aja, ụfọdụ na akwụkwọ ahụ aja na ga-abịa site na aka nke ụdị ndị ọhụrụ na na dị ka ọ dị na mbụ, ọ bụ naanị maka ọnụ a.
Ọ dị m nwute idebe unu niile na-eche nke ọma mana mana ndị a bụ akwụkwọ ahụaja 28 nke Pixel 3 na 3 XL wetara gị naanị m @Nwanyi_ocha. Gaa na edemede ma pịa njikọ Google Drive iji budata ọwa akwụkwọ ahụaja mara mma. https://t.co/J444CEKUmj#Pixel3 pic.twitter.com/UhYTdMkU8h
Ishan Agarwal (@ IshanAgarwal24) September 25, 2018
N'ihi Ishan Argawal, ugbua anyị nwere ha n’aka anyị, ụbọchị ole na ole tupu Google Pixel 3 ọhụụ ewepụtara ma rute n'ahịa ahụ N'oge a, ọ bụghị naanị na ọ na-eme ka akwụkwọ ahụaja niile dịnụ dị anyị aka, kamakwa -enye anyị ohere ibudata ọhụrụ na akwụkwọ ahụ aja APK.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịbụ otu n’ime ndị mbụ ịmalite iji akwụkwọ ahụaja ọhụrụ ndị a, ị ga-agabiga na njikọ ọzọ, jikọọ na ndekọ ndekọ Google Drive ebe a hụrụ ihe onyonyo niile yana APK iji nwee ike ịnụ ụtọ ha. Site na Androidsis anyị ebudatara ha ma tinye ha n'aka gị na njedebe nke isiokwu a. N'ezie, ọ bụ naanị na akwụkwọ ahụ aja, na ngwa bụ nanị dị na njikọ.
Ọtụtụ nwere mkpebi nke 1.920 × 1.080, ebe ndị ọzọ nwere mkpebi nke 2.880 x 2.880. Ha niile ga-adaba na ihuenyo nke akụrụngwa anyị, n'agbanyeghị mkpebi ị nwere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Budata akwụkwọ ahụ aja nke Google Pixel 3